पत्रकार र कलाकारहरू विज्ञापनमा बिकेपछि
पत्रकार, कलाकार भनेका देशका गहना हुन् । राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत यिनका कामको अमिट छाप रहन्छ । कुनै एक देशको पत्रकारले भनेका कुरा अन्य देशका मानिसले समेत पत्याउँछन् । हिरो-हिरोइनको सिको गर्ने त कति छन् कति ! आफूलाई मन पर्ने लेखक, पत्रकार कलाकारलाई भगवान्कै रूपमा मानिसले पुज्ने गरेको पाइन्छ । एउटा पत्रकार वा कलाकारको आम सर्वसाधारणको जीवनमा कति उच्च स्थान र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, बताइरहनु पर्ने कुरै होइन ।
अरूजस्तै पत्रकारिता, कलाकारिता पनि पेशा नै हो । त्यसबाहेक छुट्टै व्यापार - व्यवसाय वा अन्य काम गर्न नसकिने त होइन । तर, आफ्नो प्रसिद्धि वा भनौं अस्तित्वको व्यापार गरेर पैसा कमाउने अर्काे बाटो अपनाउनु सच्चा कलाकार, पत्रकारका लागि सुहाउँदो कुराचाहिँ होइन । हुन त कलाकारले विज्ञापन खेल्दा पनि ‘हामीले आफ्नो कलाकारिता नै प्रस्तुत गरेको’ मत प्रकट गर्लान् । तर फिल्म, टेलिसिरियल वा अरू कार्यक्रमजस्तो हुनै सक्दैन विज्ञापन ।
किनकि, विज्ञापन सामग्री यस्तो चिज हो, जसले मानिसलाई सूचित मात्र नभई आकर्षित पनि गर्छ । साइनबोर्डमा खसी लेखेर बाख्रीको मासु बेच्ने जमानामा विज्ञापनमा भनिएजति सतप्रतिशत सत्य हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? समाचार त फेक आउन थालेका छन् भने विज्ञापन त परकै कुरा भयो । पैसाले नपुगेर भनौं भने पत्रकारको भन्दा फिल्मका कलाकार (अभिनेता, अभिनेत्री) को पारिश्रमिक कहाँ हो कहाँ बढी हुन्छ । तर, यो मामिलामा पत्रकारभन्दा कलाकार नै धेरै बिकेका देखिन्छन् । अचेल पत्रकार पनि बिकेको विज्ञापन देख्न थालिएको छ ।
कलाकार तथा अभिनेता, अभिनेत्री कुनै उत्पादन वा कम्पनीका लागि विज्ञापनमा बिकिरहेको अवस्था नेपालको मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बनेको यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि बढ्दो छ । साबुन, सर्फ, स्याम्पू, टुथपेष्ट, क्रिम, सिमेन्ट, छड, इँटा, टायल, मोबाइल, टिभी, फ्रिज, मोटर, गाडी, बिस्कुट, चाउचाउ, चामल, पीठो, मसला, तेललगायत नुनदेखि सुनसम्मकै विज्ञापन गरिएको देखिन्छ । औषधिसमेतको विज्ञापन छ । यस्तै, अस्पताल, स्कुल, बैंकहरू पनि तँछाडमछाड गर्दै विज्ञापनमा उत्रिरहेका छन् ।
हुन त विज्ञापनकै जमाना हो यो । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो उत्पादन वा संस्थागत प्रचारप्रसार गर्नु अस्वाभाविक होइन तर त्यसमा सेलिब्रिटी प्रयोग भइदिँदा जनसाधारण सजिलै प्रभावित भइरहेका छन् । मनोरञ्जनका अलावा पत्रकारले जस्तै विकृति, विसंगति उदांगो पार्दै समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु कलाकारको पनि कर्तव्य हो । पैसाकै लागि जस्तोसुकै उत्पादन वा कम्पनीलाई राम्रो भनेर प्रचार गरिदिँदा आम सर्वसाधारणमा कस्तो छाप पर्ला ? आफूलाई मनपर्ने, राम्रो लाग्ने तथा आफूले मान्ने गरेका अभिनेता, अभिनेतृहरूले नम्बर वान, मजबुत, टिकाउ, विश्वासिलो, भरपर्दाे, गुणस्तरीय, उत्कृष्ट आदि भनेर प्रचार गरेका सामग्री वा कम्पनीलाई त्यस्तै रूपमा बुझेर उपभोक्ता, ग्राहक बन्ने मानिस थुप्रै छन् । यसतर्फ विज्ञापनमा खेल्नेहरू सबै सचेत छन् त ?
चलचित्र पनि एकप्रकारको मिडिया सामग्री नै हो, हलको ठूलो पर्दा वा टिभीको सानो स्क्रिनमा प्रशारण हुने । अचेल युटुबमासमेत हेर्न सकिन्छ । विज्ञापन त झन् मिडिया सामग्री नहुने कुरै भएन । त्यसैले यो सवाल यहाँ उठान गरिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्दा अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनीजस्ता पुराना सुपरस्टारहरू नै विज्ञापनमा छाएका छन् ।
शाहरूख, अक्षय, ऋतिक, ऐश्वर्या, जुही, काजोललगायत नयाँ–पुराना अरू थुप्रै नायक नायिकाहरू विज्ञापनमा खेल्ने टेक्ने तीव्र रफ्तारमा चलेको छ इण्डियामा । त्यसो त कैयौं दिग्गज कलाकारले विज्ञापनमा नखेलेका पनि छन् । शायद उनीहरूले आफ्नो प्रसिद्धि, वर्षाैंवर्ष लगाएर कमाएको ख्यातिलाई विज्ञापन कम्पनीको व्यापार बनाउन चाहेनन् । वा विज्ञापन खेल्दा जनसाधारण भ्रममा पर्न सक्छन् अर्थात् आफूले गरेको प्रचार पूरै सत्य नहुन सक्छ भन्ने लाग्यो उनीहरूलाई । कैयौं नामी खेलाडीहरू पनि विज्ञापनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।
नायक-नायिकाको कुरा गर्दा नेपालका सुपरस्टार राजेश हमाल पनि विज्ञापनमा आएका छन् । अरू त छँदै छन् । नेपालमा हिरो हिरोइन भन्दा पनि हाँस्यकलाकारहरू बढी विज्ञापनमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । मह जोडीकै कुरा गरौं, फिल्ममा भन्दा अचेल धेरै विज्ञापनहरूमा उनीहरू खेलिरहेको देख्न सकिन्छ । अभिनेता, अभिनेतृहरूको त कुरा गरी साध्यै छैन । हुँदाहुँदा पत्रकारसमेत विज्ञापनमा बिक्न थाले र पो टेलिभिजन च्यानलका कार्यक्रम प्रस्तोतालाई हेरौं त ! विज्ञापन एजेन्सी नै साझेदारीमा चलाएर विज्ञापनमा खेलिरहेका छन् । जनसमर्थनको नाममा चर्काे व्यापार गरिरहेको खुलेआम दृष्टान्त हो यो ।
ठूलो पर्दाका कलाकर्मीहरू विज्ञापनमा आँखा चिम्लेर हामफाल्ने प्रवृत्ति भएजस्तै सानो पर्दा सञ्चालक अर्थात् टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि अन्धाधुन्द विज्ञापन सामग्री प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ । टिभी च्यानलमा यस्तोसम्म विज्ञापन आइरहेको छ, ‘के तपाईं ग्रहदशाको कारण चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने फलानो ज्योतिषीलाई भेट्नुहोस् । ’
टिभी च्यानललगायत रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन, सबै खाले मिडियामा यस्ता अनेकथरी विज्ञापन आइरहेका छन् । त्यसो त मिडिया चल्ने आधार नै विज्ञापन हो । यसो भन्दैमा जथाभावी विज्ञापन सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा म्यानपावर कम्पनीबाट कैयौं सर्वसाधारण ठगिए नि ! त्यसको जिम्मेवार को त ?
डिया कि सम्बन्धित कम्पनी ? विज्ञापनमा प्रशस्त झुटको खेती हुने भएकैले कुनै भारतीय पत्रिकामा विज्ञापन पृष्ठको तल ‘विज्ञापनहरूको विश्वसनीयता तथा जवाफदेहिता सम्बन्धित विज्ञापनवाला कम्पनीमै रहने’ व्यहोराको सूचना छाप्ने गरेको छु । तर, नेपाली पत्रपत्रिकामा अहिलेसम्म यस्तो लेखेको पाइन्न । अब पत्रिका मात्र होइन, रेडियो, टिभी, अनलाइन सबैले यस्तो जनाउ दिने चलन चलाउने कि ! (जनआस्था साप्ताहिकबाट)